उत्पत्ति २९ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
याकुब राहेललाई भेट्‌छन्‌ (१-१४)
याकुबको राहेलसित माया बस्छ (१५-२०)
याकुब राहेल र लेआसित विवाह गर्छन्‌ (२१-२९)
लेआपट्टिबाट याकुबका चार छोरा: रुबेन, सिमियोन, लेवि र यहुदा (३०-३५)
२९ त्यसपछि याकुबले आफ्नो यात्रा जारी राखे। तिनी पूर्वतिर* लागे। २ अनि हिँड्‌दा-हिँड्‌दा तिनी भेडा चर्ने चौरमा आइपुगे र तिनले त्यहाँ एउटा इनार देखे। इनारको वरपर तीन बगाल भेडा बसिरहेका थिए। गोठालाहरूले त्यही इनारबाट आफ्नो बगाललाई पानी खुवाउने गर्थे। त्यस इनारको मुख ठूलो ढुङ्‌गाले बन्द गरिएको थियो। ३ त्यहाँ सबै बगाल ल्याइसकेपछि गोठालाहरू त्यो ढुङ्‌गा हटाउँथे र बगाललाई पानी खुवाउँथे। त्यसपछि त्यस ढुङ्‌गाले इनारको मुख फेरि बन्द गर्थे। ४ याकुबले तिनीहरूलाई सोधे: “हे मेरा भाइहरू हो, तपाईँहरू कहाँका हुनुहुन्छ?” तिनीहरूले जवाफ दिए: “हामी हारानका हौँ।”+ ५ याकुबले तिनीहरूलाई फेरि सोधे: “तपाईँहरू नाहोरको+ नाति लाबानलाई+ चिन्‍नुहुन्छ?” तिनीहरूले भने: “चिन्छौँ।” ६ त्यसपछि याकुबले सोधे: “उहाँलाई कस्तो छ?” तिनीहरूले भने: “उहाँ सन्चै हुनुहुन्छ। ऊ, भेडाहरू लिएर आउँदै गरेकी ती केटी उहाँकै छोरी राहेल हुन्‌!”+ ७ त्यसपछि तिनले भने: “अझै आधा दिन बाँकी छ। बगाललाई जम्मा गरेर गोठतिर लाने बेला पनि भइसकेको छैन। तपाईँहरू किन भेडाहरूलाई पानी खुवाएर फेरि चराउन लैजानुहुन्‍न?” ८ तिनीहरूले जवाफ दिए: “अरूको बगाल पनि आउन बाँकी छ। यहाँको चलनअनुसार सबैको बगाल जम्मा नभएसम्म पानी खुवाउन पाइँदैन। सबै जना आएपछि मात्र हामी इनारको मुखको ढुङ्‌गा हटाउँछौँ र बगाललाई पानी खुवाउँछौँ।” ९ याकुब तिनीहरूसित कुरा गरिरहेकै बेला राहेल आफ्नो बुबाका भेडाहरू लिएर आइपुगिन्‌। तिनी भेडा गोठाल्नी थिइन्‌। १० आफ्ना मामाकी छोरी राहेल र मामाका भेडाहरू देख्नेबित्तिकै याकुबले तुरुन्तै इनारको मुखको ढुङ्‌गा हटाएर भेडाहरूलाई पानी खुवाए। ११ त्यसपछि याकुबले राहेललाई म्वाइँ खाए* र डाँको छोडेर रुन थाले। १२ अनि याकुबले आफू तिनको बुबाको नातेदार* र रिबेकाको छोरा हुँ भनी राहेललाई बताए। तब राहेलले झट्टै गएर आफ्नो बुबालाई यो कुरा बताइन्‌। १३ आफ्नो भान्जा आएका छन्‌ भनेर सुन्‍नेबित्तिकै लाबान+ याकुबलाई भेट्‌न गइहाले। याकुबलाई भेटेपछि लाबानले तिनलाई अङ्‌गालो हाले, म्वाइँ खाए र घरमा लगे। अनि याकुबले पनि आफ्नो सबै कुरा लाबानलाई बताए। १४ लाबानले तिनलाई भने: “तिमी मेरै हाड र मासु हौ।”* याकुब लाबानकहाँ एक महिना बसे। १५ त्यसपछि लाबानले याकुबलाई भने: “हुनत तिमी मेरो नातेदार* हौ+ तर त्यसो भन्दैमा तिमीले मकहाँ सित्तैँमा काम गर्नुपर्दैन। मलाई भन, तिमीलाई ज्याला कति चाहिन्छ?”+ १६ लाबानका दुई छोरी थिए। जेठीको नाम लेआ र कान्छीको नाम राहेल थियो।+ १७ लेआको आँखामा चमक थिएन तर राहेल भने असाध्यै हिसी परेकी र राम्री थिइन्‌। १८ याकुबको राहेलसँग माया बसिसकेको थियो। त्यसैले तिनले भने: “तपाईँकी कान्छी छोरी राहेलसित मेरो बिहे गरिदिनुहुन्छ भने म सात वर्ष तपाईँकहाँ काम गर्न राजी छु।”+ १९ याकुबको कुरा सुनेर लाबानले भने: “अरूलाई छोरी दिनुभन्दा त तिमीलाई दिनु नै बेस। हुन्छ, मसँगै बस।” २० राहेललाई पाउन याकुबले सात वर्ष लाबानकहाँ काम गरे।+ तर तिनलाई सात वर्ष पलभरमै बितेजस्तो लाग्यो किनभने तिनी राहेललाई असाध्यै प्रेम गर्थे। २१ त्यसपछि याकुबले लाबानलाई भने: “मैले तपाईँकहाँ काम गरेको सात वर्ष पूरा भयो। अब राहेलसित मेरो बिहे गराइदिनुहोस्‌।”* २२ अनि लाबानले त्यस ठाउँका सबै मानिसलाई बोलाएर भोज दिए। २३ लाबान याकुबलाई झुक्क्याएर तिनको बिहे लेआसित गराइदिन चाहन्थे।* त्यसैले साँझ परेपछि लाबानले याकुबकहाँ राहेलको साटो लेआलाई लगिदिए। २४ लाबानले आफ्नी छोरी लेआको सेवा गर्न आफ्नी दासी जिल्पाह पनि लेआलाई दिए।+ २५ याकुबले भोलिपल्ट बिहान हेर्दा राहेलको सट्टा लेआ पो रहेछिन्‌! त्यसैले तिनले लाबानलाई भने: “तपाईँले यो के गर्नुभएको? मैले राहेलसित बिहे गर्न तपाईँकहाँ काम गरेको होइन? तपाईँले मलाई किन झुक्क्याउनुभयो?”+ २६ त्यसपछि लाबानले भने: “हाम्रो चलनअनुसार जेठी हुँदाहुँदै कान्छीको बिहे पहिला गरिदिनु हुँदैन। २७ यो एक हप्ता लेआसँगै बिताऊ। त्यसपछि म राहेलको बिहे पनि तिमीसितै गरिदिन्छु। तर तिमीले अर्को सात वर्ष मकहाँ काम गर्नुपर्छ।”+ २८ याकुबले त्यसै गरे; तिनले लेआसँग पूरै एक हप्ता बिताए। त्यसपछि लाबानले याकुबसितै राहेलको बिहे गराइदिए। २९ अनि लाबानले आफ्नी छोरी राहेलको सेवा गर्न आफ्नी दासी बिल्हा+ पनि राहेललाई दिए।+ ३० याकुबले राहेलसँग पनि सम्बन्ध राखे। तिनी लेआलाई भन्दा राहेललाई धेरै प्रेम गर्थे। त्यसैले याकुबले अर्को सात वर्ष लाबानकहाँ काम गरे।+ ३१ याकुबले लेआलाई माया नगरेको* यहोवा परमेश्‍वरले देख्नुभयो। त्यसैले उहाँले लेआको कोख खोलिदिनुभयो+ तर राहेल भने बाँझी थिइन्‌।+ ३२ लेआ गर्भवती भइन्‌ र तिनले एउटा छोरा जन्माइन्‌। तिनले उसको नाम रुबेन*+ राखिन्‌। तिनले यसो भनिन्‌: “यहोवा परमेश्‍वरले मेरो पीडा बुझ्नुभएको छ।+ अब त मेरा पतिले मलाई माया गर्नुहुनेछ।” ३३ लेआ फेरि गर्भवती भइन्‌ र अर्को छोरा जन्माइन्‌। तिनले उसको नाम सिमियोन* राखिन्‌।+ तिनले यसो भनिन्‌: “यहोवा परमेश्‍वरले मेरो बिन्ती सुन्‍नुभयो। मेरा पतिले मलाई माया नगरेको परमेश्‍वरले देख्नुभयो। त्यसैले उहाँले मलाई अर्को छोरा पनि दिनुभयो।” ३४ त्यसपछि तिनी फेरि गर्भवती भइन्‌ र छोरा जन्माइन्‌। तिनले उसको नाम लेवि* राखिन्‌।+ तिनले यसो भनिन्‌: “अब त मेरो पति मसँग नजिक हुनुहुनेछ किनभने मैले उहाँको लागि तीन जना छोरा जन्माइसकेँ।” ३५ त्यसपछि तिनी फेरि एक चोटि गर्भवती भइन्‌ र छोरा जन्माइन्‌। तिनले उसको नाम यहुदा* राखिन्‌।+ तिनले यसो भनिन्‌: “अब म यहोवा परमेश्‍वरको प्रशंसा गर्छु।” त्यसपछि तिनका अरू सन्तान भएनन्‌।
^ अर्थात्‌, कनानको उत्तर-पूर्वतिरका मानिसहरूको देशतिर।
^ त्यतिबेला अभिवादन गर्दा म्वाइँ खाने (जस्तै, गालामा) चलन थियो।
^ शा., “भाइ।”
^ वा “तिमी र मबीच रगतको नाता छ।”
^ वा “राहेलसित सम्बन्ध राख्न दिनुहोस्‌।”
^ वा “तिनले लेआसित सम्बन्ध राखून्‌ भन्‍ने चाहन्थे।”
^ शा., “घृणा गरेको।”
^ यसको अर्थ हो, “हेर्नुहोस्‌, मेरो छोरा भयो!”
^ यसको अर्थ हो, “सुनुवाइ भयो।”
^ यसको अर्थ हो, “नजिक हुनु; जोडिनु।”
^ यसको अर्थ हो, “प्रशंसा गरिएको; प्रशंसाको पात्र।”